गृहमन्त्रीज्यू, सेनालाई फकाउने, प्रहरीलाई थर्काउने ? - Dainik Nepal
गृहमन्त्रीज्यू, सेनालाई फकाउने, प्रहरीलाई थर्काउने ?
शिवजी श्रेष्ठ २०७४ असार ३१ गते २१:३५
गृहमन्त्रीजी उर्जा मन्त्रालयमा हुँदाको जस्तै ‘उर्जा’ तपार्इँले गृहमन्त्रालयमा पनि लिएर आउनु भएको होला ?
जब जब सरकारमा नयाँ गृहमन्त्रीको नियुक्ति हुन्छ, तब स्वभाविक रुपमा गृहमन्त्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षक भ्रमण गर्ने गर्दछन् । तब धम्कीपूर्ण भाषामा गृहमन्त्रीको निर्देशन आउँछ, जहाँ प्रहरीहरुप्रति ‘…नत्र भने…?’ भन्ने भावमा चेतावनीका स्वरहरु अखबारमा भंगेरे टाउकोमा समाचारमा शीर्षकहरु छापिन थाल्दछ । तर, नयाँ रक्षामन्त्रीहरु सेनाको मुख्यालय भ्रमणमा गएको समाचारमा भने सेनाको भूमिकाको प्रशंसाका प्रसंगहरु छापिएका हुन्छन् । यस्तो किन हुन्छ ? के प्रहरीहरु सबै अनि सँधै चेतावनी मात्रै पाउने योग्य हुन्छन् त ?
केही समयअघि नवनियुक्त गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रहरी प्रधान कार्यालय भ्रमणमा केही त्यस्तै समाचारहरु पढिए । भनिन्छ– प्रहरीको तालुकवाला गृहमन्त्रीहरु अधिकांशतः प्रहरीभित्र यथोचित सुधारभन्दा पनि यथास्थितिमै आफ्नो वरपर घुमिरहने प्रहरीको स्वरुप नै मन पराउने प्रवृत्तिका बढी आए र गए । तर, उर्जामन्त्रीको रुपमा काठमाडौंलाई लोडसेडिङ मुक्त गराएर चर्चामा आएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्रीको रुपमा आएपछि उनले सुरु गरेका सुधार सम्बन्धी योजना र सुरक्षाविदहरुसँग परामर्श गरेका समाचारहरु बाहिरिँदै गर्दा केही आशाका किरणहरु नपलाएका भने होइनन् ।
सबैले बुझेका र बुझ्नुपर्ने यथार्थ देशको आन्तरिक व्यवस्थामा हुने कुनैपनि प्राकृतिक वा सामाजिक गडबडीमा सबैभन्दा पहिलो प्रतिक्रिया वा गतिविधि नै प्रहरीबाट हुन्छ । प्राकृतिक विपत्ति हुन वा सुरक्षाका प्रश्नहरु हुन जनताले सबैभन्दा पहिले सम्झिने नै प्रहरीलाई हो । तर, कसैले पनि सम्झिएको हुँदैन् कि प्रहरीसँग पर्याप्त साधन स्रोत छ कि छन कि छैनन् ? त्यसको लागि प्रहरी सक्षम छन् कि छैनन् ? सुरक्षाका प्रश्नमा त प्रहरीको सम्झना स्वभाविक छ नै, तर प्राकृतिक विपत्तिदेखि कुनैपनि मानव सिर्जित विपत्तिमा समेत सबैले पहिले खोजी गर्ने नै प्रहरीलाई हो । चाहे त्यो सप्तरीको महली खोलामा आएको बाढी होस वा मुग्लिनको बाटो बन्द हुनेगरी आएको पहिरो पन्छाउन होस (जहाँ पाँच जना प्रहरी आफै पुरिए), वा धादिङको चेपाङ्ग बस्तीलाई नै उजाड बनाउने पहिरो वा भोजपुरको बजार नै सखाप पार्ने आगलागीमा होस, जनताले सबैभन्दा पहिले सम्झिने त प्रहरीलाई नै हो । त्यसैले प्रहरीको तालुकवाला मन्त्रीको नाताले गृहमन्त्रीले सोच्नुपर्ने टडकारो प्रश्न– के वर्तमान प्रहरीसँग यी प्राकृतिक अनि मानव सिर्जित दैवी विपत्ति अनि जनताको सुरक्षाको लागि पर्याप्त श्रोत र साधनहरु छ त ? पक्कै पनि गृहमन्त्रीले प्रहरीभित्र सुधारको लागि कदम चाल्ने क्रममा सुरक्षाविदहरुसँग गर्नुभएको छलफलमा यी कुराहरु उठे होलान नै ।
वर्तमान गृहमन्त्रीले गृह प्रशासनमा सुधार गर्न जन प्रशासनिक कदम चाल्न खोज्नुभएको छ । तर, मात्रै प्रशासनिक कदमले मात्रै पर्याप्त सुधार हुनेवाला छैनन् । प्रहरीभित्र सुधार गर्ने हो भने प्रशासनिक सुधार त छँदैछ, तर मुख्यतः प्रहरीको खस्किएको मनोबल, अपर्याप्त श्रोत साधन र सुविधा जस्ता कुराहरुलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । यी सम्पूर्ण प्रश्नहरुलाई एउटै लेखमा समेट्न असम्भव हुँदा आगामी अंकमा समेट्ने गरी अहिलेलाई प्रहरीको साधन र श्रोतमा केन्द्रीत गरौं ।
नेपालमा बर्खा लाग्यो, बाढी पहिरो अनि डुबानका समाचारहरु आउन थालिसकेको छ । गतवर्ष धादिङको विकट चेपाङ्ग गाउँमा आएको पहिरोबाट चेपाङहरुलाई बचाउन ‘चौकीदेखि खतरा मोल्दै हिडेको प्रहरी टोली’ पुरै डुकडीमध्ये दुई जना जवान मात्रै पहिरो छिचोल्दै बस्तीमा पुगेर आफैले बोक्दै चेपाङहरुलाई सुरक्षित गराए । तर, आफै पहिरोमा पुरिएको भए ? तर प्रहरीसँग आफ्नै हेलिकप्टर भइदिएको भए ?
विगतको ती दृश्य सम्झनामा आइरहेछ– करिब २३ वर्ष अगाडि मोरङ्गको कटहरीमा आगलागी भएको थियो । जुट मिलमा दनदनी बलेको आगो निभाउन आफ्नै नेतृत्वमा प्रहरी टोली लिएर मिलमा पुग्दा सयौको संख्यामा जम्मा भएर आगो निभाइरहेको जनताहरु खुसी हुँदै ‘प्रहरी आयो, प्रहरी आयो’ भन्दै आशापूर्ण नजरमा प्रहरीको ‘वानटुन’ छेउ आइपुगे । तर हातमा बेल्चा र बाल्टिन बोक्दै वानटनबाट ओर्लिदै गरेका प्रहरी देखेर ती उत्साहित जनताहरु निराश हुँदै फेरि आगो भएतिर निभाउन गए । किनकी त्यो आगो २–४ वटा दमकललाई समेत भारी हुने स्तरको थियो । तर विचरा हामी प्रहरीहरुसँग बेल्चा र बाल्टिन मात्रै थियो, त्यो पनि किङ्गस व्याटनका लागि सजाउन किनिएका ।
अझ कतिपय प्रहरी कार्यालय त आफै धकेल्दै गाडी स्टार्ट गरेर आफै चढ्दै गस्तीमा हिड्नुपर्ने अवस्थाबाट पीडित छन् । अनि त प्रहरीले आरोप खेप्छन् – प्रहरी घटनास्थलमा समयमै पुग्दैनन् भनेर । पुगोस पनि कसरी कठै । ती प्रहरी बीच बाटोमा आफै चढ्ने गाडी ठेल्दै पो थिए कि ?
गृहमन्त्रीले बेला बेला पक्कै सुनेकै होलान– बाढीमा उद्दार गर्न गएका प्रहरी नै बाढीले बगाएको । अझ त्रिशुलीमा लगातार खसिरहने गाडी र यात्रुहरुको शव खोजी गर्न बंगलादेशबाट गोताखोर झिकाइरहनु परेको व्यथाहरु । अझैसम्म पत्ता लागेन कुनैदिन गृहमन्त्री नै भएका व्यक्तिको शव । यदि प्रहरीसँग साधन र स्रोत सम्पन्न गोताखोर भइदिएको भए ?
गृहमन्त्रीको नजरबाट त पक्कै छिपेको छैन् होला प्रहरीको गाडीको अवस्था । जब कुनै बन्द, हड्ताल हुन्छन् तब सिडिओको आडमा अरु सरकारी कार्यालयको गाडी माग्दै सुरक्षामा खटिन परेको । अझ कतिपय प्रहरी कार्यालय त आफै धकेल्दै गाडी स्टार्ट गरेर आफै चढ्दै गस्तीमा हिड्नुपर्ने अवस्थाबाट पीडित छन् । अनि त प्रहरीले आरोप खेप्छन् – प्रहरी घटनास्थलमा समयमै पुग्दैनन् भनेर । पुगोस पनि कसरी कठै । ती प्रहरी बीच बाटोमा आफै चढ्ने गाडी ठेल्दै पो थिए कि ? प्रहरीलाई गाडी किन्ने पर्याप्य बजेट छदै छैन्, भएपनि सुडानको बख्तरबन्द किने जसरी ‘त्यतै कतै’ अल्मिलिएको होलान ।
अर्काे टड्कारो अभाव भनेको प्रहरीको ब्यारेक भवन पनि हो । पहिले– पहिले त भत्किएका प्रहरी ब्यारेकमा भन्दा बंकरभित्र चिसोले कठ्याङ्ग्रिदै सुत्थे प्रहरी । तर अब बन्दै गरेका र बनेका ब्यारेकहरु कति पर्याप्त भए गृहमन्त्रीले चासो राख्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरी कार्यालय त बने होलान तर ब्यारेक त कुन्नी ? उर्जामन्त्री हुँदा कुलमान घिसिङलाई पावर स्टेशन– स्टेशनमा पठाए जसरी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र विभागीय प्रमुखहरुलाई परदेशका प्रहरी चौकीका ब्यारेकमा रात विताउन पठाउनुहोस् र बेलाबखत आफू पनि जानुहोस्, तब थाहा पाउनु हुनेछ प्रहरीको यथार्थ अवस्था ।
गृहमन्त्रीजी थाहा छ ? आजभन्दा २५ वर्ष अगाडि प्रहरीको लागि हेलिकप्टर खरिद गर्ने बजेट छुट्याएको कुरा आयो, तर त्यो हेलिकप्टर कहिल्यै उडेन । तर प्रहरीको त्यो हेलिकप्टर किन उडेन ? भनेर सोधखोज गर्ने गृहमन्त्री कहिल्यै आएन् ।
गृहमन्त्रीज्यू, प्रहरीलाई यस्तो गृहमन्त्रीको आवश्यकता छ, जो आदेश र निर्देश मात्र हैन प्रहरीलाई भरथेग पनि गर्दछ । प्रहरीको साधन र सुविधाप्रति पनि चासो दिन्छ । प्रहरीलाई पाँच मिनेटभित्रै पुग्न आदेश दिने त थुप्रै आए, तर पाँच मिनेटभित्र स्टार्ट हुने गाडी छ कि छैन् ? भनेर सोधीजोखी गर्ने गृहमन्त्री आएनन् । गृहमन्त्रीजी थाहा छ ? आजभन्दा २५ वर्ष अगाडि प्रहरीको लागि हेलिकप्टर खरिद गर्ने बजेट छुट्याएको कुरा आयो, तर त्यो हेलिकप्टर कहिल्यै उडेन । तर प्रहरीको त्यो हेलिकप्टर किन उडेन ? भनेर सोधखोज गर्ने गृहमन्त्री कहिल्यै आएन् ।
त्यसैले गृहमन्त्रीजी उर्जा मन्त्रालयमा हुँदाको जस्तै ‘उर्जा’ तपार्इँले गृहमन्त्रालयमा पनि लिएर आउनु भएको होला ? भनेर प्रहरीभित्र र बाहिरबाट पनि चासोसाथ हेरिएको छ । तसर्थ, बाहिरबाट नदेखिएको तर भित्रबाट अनुभुति हुने माथिका प्रश्नहरुको जवाफ खोजी गरेर हेर्नुहोस् । तपाईभित्र प्रहरीले यही कुरा जवाफ खोजिरहेछन् । हेरौ, तपाईसँग यसका जवाफहरु छन् कि छैनन् ।
लेखक नेपाल प्रहरीका पूर्व डीएसपी हुन् ।